Dharbaax kubbadda Yosemite - Sida loo arko - ama Fuuli
Tilmaamaha Dhimirka Yosemite
Tilmaamaha booqashada nus bilawga ah
Yosemite's Dome Dome waa astaanta astaanta beerta. Dhuxul dhagax ah, waji mug leh waa woqooyiga Ameerika oo qulqulaya todobo darajo oo toos ah. Maaha cusub, laakiin waa 87 milyan oo sano jir, waa dhagaxa qoryaha ugu yar (dhagaxa lagu sameeyay dhulka hoostiisa) ee dooxada Yosemite.
Qiyaasta ugu sarreeya ee Dome waa 8,842 feet oo sare ah, 5,000 feet oo ka sarraysa dabaqa Dooxada Yosemite.
Eegida Half Dome
Haddii aadan aheyn hookaha, waxaad arki doontaa kaliya Dome Dome meel fog, laakiin waa qeyb weyn oo ka mid ah muuqaalka Yosemite.
Kuwani waa meelaha ugu fiican ee lagu eego Half Dome (oo laga yaabo in la qaado sawir ama laba):
Cawska Cook: Cawska ku yaala bartamaha dooxada ayaa bixiya waxyaabo badan oo raaxo leh oo ka mid ah Half Dome waana wax aan waligeed muuqaal lahayn.
Mirror Lake: Guga, marka harada biyo ka buuxdo, waxay ku nooshahay magaceeda, iyadoo Half Dome ay ka muuqato muraayadeeda. Buuldunku waa socod dheer oo ka yimaada istaagida # 17
Kutubka Gawaarida: Meel ka fogaanshaha barta Wawona Road ka hor inta aadan gaarin tunnelka, waxaad arki kartaa Half Dome, El Capitan iyo Bridalveil Fall dhammaanba isla muuqaalka guud.
Sentinel Bridge: Buundada ka jirta Merced River ee ku dhow agagaarka Yosemite Village, waxaad arki kartaa xayawaanka u dhexeeya dhirta oo ka muuqda dusha webiga. Aad bay u fiicantahay galabtii.
Glacier Point : At Glacier Point, waxaad arki doontaa Half Dome in ka badan isla heer sare ah halkii aad ka fiirin lahayd Dooxada Dooxada. Tani waa meesha ugu fiican ee lagu arko sawirka kala duwan ee Half Dome.
Olmstead Point: Aragtida Tioga Road (CA Hwy 120) waxay muujinaysaa dhinaca dambe ee Dome iyo dhejiyeyaasha ama lens-ka telefoonka ah, waxaad arki kartaa rukuucyada samaynta wadada.
Duulinta Dubbada Half
Hikers ayaa kor u qaadaya dhinaca "dhabarka" ee qeyb ka mid ah Dome, dhinaca wareegsan, maaha ilaa derbiga dhagax weyn.
Safarka 17-mile ee wareegga ah ee Dome ee Dooxada Yosemite waxay qaadataa 10 ilaa 12 saacadood, iyo 4,800 foot kiiloogga saafiga ah ayaa kaliya loogu talagalay dadka ugu raaxaysta, kuwaas oo kor u qaada 400 fuudh ugu dambeyntii sare ee dabaqa sare ee jaranjarada oo leh taageerooyin kabaan oo u shaqeeya sida handrails.
Ilaa kumanaan kun oo qof ayaa maalin waliba soo jiidaya wadiiqada si ay u soo baxaan dhinaca dambe ee Dome dhamaadka todobaadka xagaaga, iyaga oo abuuraya xaalado adag iyo xaalado halis ah. Sanadkii 2010kii, baarkinka wuxuu bilaabay inuu u baahdo dhammaan rukuucyada si uu u helo ogalaansho hore, isaga oo xaddidaya Half Dome Trail ilaa 300 maalin-rooke iyo 100 boorso-gacmeed maalintii. Ruqsadaha waxaa looga baahan yahay maalin kasta isbuucaan, mana jirto ogolaansho maalmeed. Soo ogow sida loo qoro mid ka mid ah bogga Yosemite.
Xiro kabo fuuli haboon oo qaado si aad u culus. On this weyn, gabal dhajisan ee granite, xitaa qalad sahlan noqon kartaa ugu dambeyntii. Ha u qaadin ereygeena. Akhri warbixinta safarka ee huuriga ah si loo helo fikrad wanaagsan oo ah waxa socota.
Inta badan hikadartu waxay bilaabaan jimicsigooda Half Dome oo ka yimaada Jasiiradda Iskuulka Iskaashiga ee "Happy Isles", taas oo ah qiyaastii nus mile oo laga soo bilaabo taariiqda. Waxa kale oo aad dhigan kartaa qaybta Dome Dome, oo ah qiyaastii 3/4 mayl. Haddii aad qorsheynayso inaad ku qaadato xerada u dhow ka hor ama ka dib wareeggaaga nuska ah, Upper Pines , Pines Lower , iyo Pines Pines Campgrounds ayaa ugu dhow, laakiin dhammaantood waa kuwa caan ah oo aad u baahan tahay inaad hore u sii qorsheyso.
Adeegga baarkinka wuxuu hoos u dhigi doonaa fiilooyinka wuxuuna xiraa Iskudhiga Half Dome xilli-ciyaareedka, inta badan usbuuca labaad ee bisha Oktoobar.
Wareegyada ayaa mar kale kor u kaca - cimilada loo oggol yahay - isbuuc dhammaadka bisha May. Booqo shabakaddooda si aad u hesho macluumaad wanaagsan oo badan - iyo liis ah waxyaabaha aad u baahan tahay in laguu qaado.
Seeraha Qaranka ee Beeraha
Laga soo bilaabo ... ilaa ... ee California
Waxyaabaha lagu sameeyo Santa Cruz
Baaskiil la oggol yahay: Baabuurta Verrazano
Jimco Wanaagsan-Cayaar Irish ama Ma aha?
Tigidhkaagu wuxuu u Heli Karaa Todobaadkii ugu Dambeeyey ee Dunida
10 Meelaha Lagu Arko Maqaalada Koonfur Hindiya
Sydney ilaa Melbourne
Hore ee Hanoi Old Quarter Hudheelka Hurdadaada ee kuugu dhow ee Vietnam
Tours ilaa Masar
Maya, Ma Jeclaan Lacag Gaduud ah Turkiga
Sida Loo Siibo Maalin Hal Maalin leh oo ku yaala Yosemite National Park
Charles County Fair 2017 ee La Plata, Maryland
Bamboo iyo Meelo kale oo Qarsoodi ah
Flagstaff, Arizona - Hagaha Ballid ee loogu talagalay Soo-booqdayaasha illaa Flagstaff